Hutano, 01 Nyamavhuvhu 2018
Chitatu 1 Nyamavhuvhu 2018
Chikunguru 19, 2018
Mapurisa Anoparura Chirongwa Chinorwisa Mhirizhonga Yakanangana neVanhukadzi Musarudzo
Mapurisa eZimbabwe Republic Police akaparura chirongwa chakanangana nekudzivirira mhirizhonga kumadzimai nevanasikana, zvikuru munguva dzesarudzo.
Chikunguru 18, 2018
Gamba reTsiva, Langton Tinago, Akashaya neChipiri muGweru
Mutambi wetsiva akaita mukurumbira kudarika vatambi vese vetsiva munyika, Langton Schoolboy Tinago, ashaya.
Chikumi 27, 2018
Nhengo dzeMDC-T Dzorangarira Vamwe Vadzo Vakapondwa Muna 2008
Vatsigiri veMDC vakaita saVaEnoch Mkudu vanoti mhirizhonga yakaitika iyi ichizere mundangariro dzavo vachiti dai hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa ikaona kuti sarudzo dzemwedzi unouya dzaitwa pasina mhirizhonga yakadai iyo yavanoti ichiri kuvabata pamoyo.
Vakambotochwa Voungana kuNyanga Vacherechedzwa Zuva Ravo Pasi Rose
Masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukucherechedza zuva revanhu vakatochwa pasi rose, re Intenational Day In Support Of Victims Of Torture - muhurongwa hwaitirwa kuNyamaropa, kuNyanga, mudunhu reManicaland.
Chikumi 25, 2018
VaTshinga Dube Vanotsanangura Zvakaitika "Bhambu" Risati Raputika
Vaimbove gurukota rinoona nezvevakamborwa hondo yerusununguko, VaTshinga Dube, vanoti bhambu rakaputika neMugovera apo ivo nemudzimai wavo vakange vachitaura nemutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaConstantine Chiwenga.
Vanhu Vaviri Vafa Zvichitevera Kuputika kweChombo kuWhite City Stadium muBulawayo
Vanhu vaviri vashaya kusvika pasi zvino mushure mekuputika kwakaitika munhandare yeWhite City musi weMugovera.
Hurumende Yokurudzirwa Kuchengetedza Vanokwikwidza Kuita Mutungamiri weNyika
VaMavhinga vanoti mapurisa anofanirwa kushanda zvakasimba mukuona kuti hupenyu hwemutungamiri wenyika hausi munjodzi.
Chikumi 16, 2018
Mapurisa Anorova neKusunga Vanhu paMugodhi weEldorado kuChinhoyi
Mapurisa aya anonzi anga achisvika makumi mashanu, uye ange akapakatira zvombo paasvika pamugodhi wegoridhe weEldorado achiti ari kuda kupinda mumahofisa ose nepanochengeterwa ivhu rinenge riine goridhe.
Huwandu Hwevanhu Vari Kuzviuraya Munyika Horamba Huchikwira
Huwandu hwevanhu vari kuzviura munyika hunonzi huri kuramba huchikwira izvo zvinonzi zvinokwanisa kudzikira kana vanhu vakakwanisa kuwana rubatsiro pachine nguva.
Chikumi 04, 2018
Madzimai Akazvitakura Okurudzirwa Kuvhenekwa Ropa Kuti Asatapurire Vacheche Chirwere cheHIV/AIDS
Bazi rezvehutano riri kukurudzira madzimai ose anenge akazvitakura kuti aende pachipatara kana kirinika iri pedyo navo kuti vanovhenekwa ropa kana vaine hutachiona hweHIV/AIDS vobva vapihwa mushonga wekuti vasatapurire vana chirwere ichi.
Zimbabwe Yoiswa muNyika Makumi Matatu Dziri Kunetswa neChirwere cheTB
Sangano rezvehutano pasi pose, reWorld Health Organisation, WHO, rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika makumi matatu pasi rose dziri kunetsekana nechirwere cherurindi, kana kuti TB.
Chivabvu 27, 2018
VaChamisa Vanobatana neVechidiki muMujaho weKumhanyira Shanduko
VaChamisa vamhanya nevechidiki muHarare muchirongwa changa chichidaidzwa kuti “Run for Change”, charongwa nevechidiki vari kuzvidaidza kuti hashtag Generational Consus.